Media Sharing – News and Media Sharing
အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင်
အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ အရာရာကို အောင်မြင်စေသော ဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ ဇယော (၉ ခေါက်ရွတ်) စီးပွါးလာဘ်လာဘ တိုးတက် စေသောဂါထာ မဟာမုနိ
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေက အခုမှ စမှာတဲ့… အခုမှ စမှာ တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတွေတော့ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြတယ်…။ တကယ်လည်း ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ် …။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သေကြ ကျေကြတာအများကြီးပါပဲ…။ ရောဂါပိုးအတွက် ဆေးမရှိသေးဘူး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတုန်းရှိသေးတယ် …။ အမေရိကန်ကစတဲ့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဟာ တခုတကမ္ဘာလုံးကို ကူးစက်ပြန့်ပွားပြီး
လက်မထပ်ခင် သင့်ချစ်သူကို မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု… အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုပ်ထိုးဆိုတာက ပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အတူကုန်ဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝေမျှခံစားဖို့၊ ပေးဆပ်တတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သလို
ကလေးမွေးပြီး(၃)ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့သေဆုံးသွားတဲ့(ဖြစ်ရပ်မှန်) ကလေးမွေးပြီး ရင် ၄၅ ရက် တိတိ ယောကျာ်း နဲ့ မနေနဲ့ ”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျ စကားပေါ့ ။ ယောကျာ်းဖြစ်ရ တာ ကံကောင်းပါတယ် ။ “ကလေးမွေးပြီးရင် ၄၅ ရက်တိတိ ယောကျာ်းနဲ့ မနေနဲ့”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ
“လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ?” ကိုယ်တွေ သဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ချစ်ပြီး အစစအရာရာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေ များလာတဲ့အခါ … ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှ
ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် မထက်ရယ် . . . ဝါရင့်မင်းသမီးချောလေး ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ… မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခညားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူကစလိုက်တယ်မသိ။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးသူတွေရဲ့လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး ဖြစ်လို့။ ဒီတော့ ငွေရှင်ခမျာလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နာ ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့သူက
ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်… ဓမ္မတာဖြစ်စဉ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ရေရှည်မှာရောဂါကြီးကြီးမားမားတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂၈ ရက်တစ်ကြိမ်ဓမ္မတာလာခြင်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဒီရက်အတောအတွင်းမှာမလာဘူးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဓမ္မတာမမှန်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဓမ္မတာပုံမှန်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို အမြဲ သတိထားပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်
အလွန် လန်းသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က JJ Express မှန်လုံ ခရီးသည်တင်ကား… လန်းလိုက်တာကွာ ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စေတနာ မြန်မာပြည် JJ Express မှန်လုံ ခရီးသည်တင် အဝေးပြေးယာဉ်တွေပေါ်က Separate ထိုင်ခုံ‌‌တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ Credit Myint Oo Ref. Po Naing Lin အခု
လုပ်ရက်လိုက်တာ…လူနာတွေကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေကိုမှ ပစ်မှတ်ထားရသလားဗျာ “ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ” ပုသိမ်ဆေးရုံကြီး ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေးဆေးဆေး လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ …။ ဒီနေ့ ကလေးဆောင်က ဆရာမလေး မနက် ရနာရီကနေ ညနေ၅ နာရီထိ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်တယ် …။ ထွက်လာတော့